Soosaaraha Shiinaha Flange iyo Alaab-qeybiye | Kingmetal
Flange waa qaab isku xira tuubooyin, fureyaal, bambooyin iyo qalab kale si loo sameeyo nidaamka tuubbada. Waxay sidoo kale bixisaa marin u fududaan nadiifinta, kormeerka ama wax ka beddelka. Isbeddellada ayaa badanaa lagu dhajiyaa ama lagu dhejiyaa nidaamyada noocaas ah ka dibna waxay ku biiraan boolal.
Flanges - Macluumaadka Guud
Flange Tani waxaa circumferentially welded galay nidaamka qoorta taas oo macnaheedu yahay in sharafta ee aagga dabacsan welded si fudud lagu baari karaa shucaaca. Dareenka labada tuubbo iyo flange labadaba, taas oo yareyneysa buuqa iyo nabaad-guurka gudaha dhuumaha. Qoorta alxanka ayaa sidaas awgeed loogu jecel yahay codsiyada muhiimka ah
Flange-kan ayaa laga siibay tuubada kadibna waa la miiray alxanka.
Flange waxaa loo isticmaalaa in lagu banneeyo dhuumaha, filtarka iyo bambooyin, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dabool ahaan kormeer. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaan 'flange flange'.
Flange Tani waa counter caajisay in ay aqbasho biibiile ka hor inta la buuxiyay alxanka The dahaarka tubbada iyo flange labaduba waa isla sidaas bixiya sifooyinka goodflow.
Flange waxaa loo yaqaan mid dunta ama xirmay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro qaybaha kale ee dunta ku jira ee cadaadiska hooseeya, codsiyada aan muhiimka ahayn. Looma baahna alxamid.
Isbeddelladaan waxaa had iyo jeer loo isticmaalaa labada dhinac ee dambe ee dambe oo ah bistoolad ku xiran tuubada iyadoo flange-ga uu ka dambeeyo. Taas macnaheedu waxa weeye dhamaadka jeexjeexa had iyo jeer wajiga ayuu sameeyaa. Isku-xidhka dhabta ayaa lagu jecel yahay codsiyada cadaadiska hooseeya maxaa yeelay si fudud ayaa loo soo ururiyaa oo loo waafajiyaa. Si loo yareeyo kharashka kuleylkan waxaa la bixin karaa iyada oo aan la helin hub iyo / ama lagu daweeyo, birta kaarboon dahaarka leh.
Wadajirka Nooca Giraanta
Tani waa hab lagu hubiyo in la sii daayo caddaynta isku xirnaanta flange ee cadaadiska sare. Giraan bir ah ayaa lagu cadaadiyey jeexdin laba geesle ah oo wejiga flange ah si loo sameeyo shaabadda. Qaabkan ku biirista waxaa lagu shaqeyn karaa Weld Neck, Slip-on iyo Blind Flanges.
Heerka ANSI ANSIB16.5, ASMEB16.47seriesA (MSS-SP-44), ASME
B16.47, taxaneB (API605)
Waxyaabaha ANSI CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
Cadaadis ANSI Fasal150,300,400,600,900,1500,2500lbs
GOST PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 ， PN63
Cabir ANSI 1/2 * -120 "
Daahan anti-rustoil, varnish, yellowpaint, blackpaint, galvanizingetc
uumi, hawo, gasandoil
Xirmo Plywoodcases / baaldiyo
Hore: Koofiyadaha Mashiinka Weld ee Tayada Sare
Xiga: Hot liqay galvanized Malleable Iron tuuboyinka suurawdo wax soo saarka beaded